Fadhiga Baarlamaanka Puntland - BBC News Somali
Fadhiga Baarlamaanka Puntland
15 Juunyo 2010
Image caption Fadhiga Baarlamaanka Maamul Goboleedka Puntland
Magaalada Garoowe waxaa si rasmi ah uga furmay kalfadhigii 24aad ee barlamanka Puntland waxana xafladdii furitaanka ee saaka looga hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ajandaha kalfadhiga iyo qodobbo kale oo u badan dhinaca nabadgelyada.
Waxaa kale oo kulankii furitaanka barlamanka lagu soo qaaday dilal qorshaysan oo lala beegsaday xubno dawladda, arrimaha burcad-badeedka iyo jabhadda SSC oo iyana lagu eedeeyay inay qalalaase ka waddo gobolka.
Kulankii maanta oo ay fadhiyeen 49 xildhibaan ayaa guddoomiyaha barlamanka Cabdrashiid Maxamed Xirsi wuxuu sheegay in arrimaha ugu muhimsan ee lagu soo qaadi doono ay ka mid yihiin xisaabxirka miiyaaniyaddii sannadkii la soo dhaafay, xeerka guddiga doorashada, xeerka xuquuqda bani’aadamka, xeerka afdida dastuurka iyo ka doodista wixii kale ee ay xukuumaddu u soo gudbiso golaha wakiillada.
Guddoomiyaha barlamanku wuxuu aad uga hadalay dhibaatooyin uu sheegay inay xannibeen socodka hawlaha dawladda Puntland isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay dilalka qorshaysan ee lala beegsaday saraakiisha dawladda qaybahooda kala duwan isagoo tilmaamay in dhibaatada inteeda badani ay soo gaartay golaha wakiillada oo saddex xildhibaan laga dilay.
Gudoomiyuhu wuxuu soo jeediyay in arrimahaasi ay yihiin kuwo haddii ay sii socdaan dhibaato xoog leh gaysan kara sidaa awgeedna loo baahan yahay in xukuumad iyo shacab ay iska kaashadaan.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed oo isaguna kulankan ka hadlay ayaa tilmaamay in dhibaatooyinkii dalka ka dhacay muddadiii u dhaxaysay labada kalfadhi, gaar ahaan dilalka saraakiisha dawladda iyo arrinta burcad-badeeda oo uu tilmaamay in ay dawladdu olole xoog leh ku hayso ayna sii wadi doonto.
Dilalka qorshaysan ayuu tilmaamay inay ka dambeeyaan ururro siyaasadeed oo adeegsanayaa dadka gudaha ka soo jeeda isagoo tilmaamay in danta laga leeyahay arrimahaas ay yihiin in lagu burburiyo Puntlnad,wuxuuna waalidiinta iyo dadwaynaha ugu baaqay inay la socdaan dadka dhallinyarada ah ee ay masuulka ka yihiin.
Dhibaatada ka taagan Buuhoodle ayuu sheegay Madaxwaynuhu inay masuulka ka yihiin maamulka Somaliland iyo jabhadda SSC oo uu ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo doonaysa inay qalalaase ka oogto gobolka oo dhan iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya xoraynta Laas caanood.